भोलि देखि सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आईपीओ विक्री खुला,कति कित्ता आवदेन दिने ?
vibes nepal / मङ्गलबार, साउन १९, २०७८ मा प्रकाशित
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले भोलि साउन २० गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो।
इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको कुल ६० लाख कित्ता शेयरमध्ये ५ % अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र अर्को ५ % सामूहिक लागनी कोषहरुलाई सुरक्षित गरेको छ।सर्वसाधारणले बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। इन्स्योरेन्सले कुल जारी पूँजीको ३० % प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको हो।
आवेदन कहिलेसम्म दिने ?
आइपीओमा छिटोमा साउन २४ गते र ढिलोमा भदौ २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि ३० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।